Ikhulu la-Beaumont lihlela ukunqoba okuphule irekhodi kwi-England kwi-T20I yesibili
Tammy Beaumont celebrates her maiden T20I century.
Ikhulu lokuqala kuma-T20 lika-Tammy Beaumont lihlele ukunqoba ngomphumela omkhulu ngama-runs (121) kuhlobo lwekhilikithi kwi-England idlala ne-South Africa kumdlalo wesibili we-T20 triangular series e-Somerset ngoLwesithathu. Lokho kwenza ama-Momentum Proteas ahlulwe ngokulandelana njengoba beqede usuku olunzima lemidlalo emibili ekhilikithi.
Emuva kokunqoba i-toss kanye nokukhetha ukushaya kuqala, iqembu lasekhaya libeke umphumela omkhulu u-250/3 lashaya o-four abangu-33 no-six abangu-9 abaphosela i-South Africa behluleka ukunqanda i-run rate ekhuphukayo. Kuphinde kwaba umphumela ophule irekhodi bedlala nezivakashi i-New Zealand njengoba i-England idlule umphumela we-New Zealand oyirekhodi elingu-216/1, behlela umphumela omkhulu weqembu kuma-T20 internationals.
u-Stacey Lackay uthathe i-wicket lakhe lokuqala, wakhipha u-Danielle Wyatt enama-runs angu-56 (36 balls, 9x4s) futhi walandela nge-wicket enkulu ka-Beaumont ne-career-best engu-116 (52 balls, 18x4, 4x6s) kodwa zigcine lapho izindaba ezimnandi kwizivakashi. u-Katherine Brunt akaphumanga enama-runs angu-42 emabholeni angu-16 (3x4s, 3x6s) no-Natalie Sciver unezezele ngama-runs angu-33 emabholeni angu-15 (3x4s, 2x6s) ngaphambi kokuthi akhishwe u-Shabnim Ismail ngebhola lokugcina kwi-innings.
Izivakashi aziqalanga kahle, balahlekelwa ama-wicket amathathu ngama-runs angu-22 kuma-overs ayisikhombisa. u-Laura Wolvaardt ukhishwe enama-runs amabili kwi-over yesibili ekhishwa u-Brunt (2/18), kwalandela u-Lizelle Lee (19 off 14 balls) ekhishwa u-Danielle Hazell (2/35) no-Tazmin Brits okhishwe u-Sophie Ecclestone nge-run out ene-run eyodwa.
Ukapteni u-Dané van Niekerk no-Mignon du Preez bebesalelwe umsebenzi wokwakha i-innings, ngalesikhathi, bahlanganisa ama-runs angu-76 nge-wicket yesihlanu ngaphambi kokuthi u-Du Preez akhishwe enama-runs angu-25 ibhola linqakwe u-Heather Knight kuphosa u-Ecclestone (1/28). Ukapteni uqhubekile washaya, wahlanganisa u-50 ngaphansi kwesimo esinzima futhi wagcina enama-runs angu-72 emabholeni angu-51 (8x4s, 3x6s) kusele amabhola angu-10 kumdlalo.
i-England inqobile, yazithola ihleli phezulu kwe-tri-series log.
Umdlalo we-South Africa olandelayo uzoba neqembu lasekhaya ngoMgqibelo ngo-13:00 (14:00 CAT).
i-South Africa iqonde ukusebenzisa izifundo kwi-T20 tri-series u-Kapp ucela ukukholwa njengoba i-South Africa ibheke ukunqoba umlando ngokunqoba u-Van Niekerk ocikekile ubheka ukuhlula i-England kumdlalo ocacisa nge-series Amakhulu ka-Taylor no-Beaumont asize i-England ilinganise i-series Moreeng praises Proteas women but wary of ‘wounded’ England as they look to clinch the series Ama-Proteas women angaphambili ngo-1-0 e-England Ama-Proteas women alungele inselelo enkulu ne-England u-Van Niekerk umangazwe ukuthola umklomelo omkhulu, wathi uyinikela eqenjini lakhe Ama-Proteas Women alindele ithuba lokubhekana ne-England futhi i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas Women elizoya e-England Ama-Proteas women athola i-T20 series whitewash